ပြန်လည်သုံးနိုင်သောထုပ်ပိုးရေးအသင်းဥက္ကpresident္ဌဟောင်းဂျယ်ရီကြိုဆို၏ဤအပိုင်းသည်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါသောဒုတိယဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဤပထမဆောင်းပါးသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုပ်ပိုးမှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္definedကိုသတ်မှတ်သည်။ ဤဒုတိယဆောင်းပါးသည်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ဤသည်မှာပြန်လည်သုံးနိုင်သောထုပ်ပိုးရေးအသင်း၏ဥက္ကthe္ဌဟောင်းဂျယ်ရီကြိုဆိုခြင်းမှအပိုင်းသုံးပိုင်းတွဲ၏ပထမဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဤပထမဆောင်းပါးသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုပ်ပိုးမှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္defကိုသတ်မှတ်သည်။ ဒုတိယဆောင်းပါးသည်စီးပွားရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးပါမည်။
တစ်ခါသုံးမျက်နှာသုတ်ပဝါများသည်ဝါဂွမ်းအမျှင်များ၊ ပျော့ပြောင်းသောကြမ်းတမ်းမှု၊ မျက်နှာဆေးခြင်း၊ မျက်နှာသုတ်ခြင်း၊ မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာဆွဲ ...
ငါတို့ Lonovae တွင်ပျားလပို့ကိုဆွဲထုတ်ရန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ နေ့စဉ်ပမာဏသည် ၁၆-၁၇ တန်အထိရှိနိုင်သည်။ အခြားကဒ်များသို့မဟုတ်ဆွန်းပြားများအစား pp honeycomb panel ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများမှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ပို။ ပို။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ PP Cellular ဘုတ်အဖွဲ့ box ကိုရွေးချယ်ပါ?
အဘယ်ကြောင့်ပို။ ပို။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ PP Cellular ဘုတ်အဖွဲ့ box ကိုရွေးချယ်ပါ? ပလပ်စတစ် pallet ဘူးများသည် pp ဆယ်လူလာအင်္ကျီလက်များ၊ ဆေးထိုးအဖုံးနှင့် pallet များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသေတ္တာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာသေတ္တာတွေကိုသစ်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်။ နှင့်ပို။ ပို။ စက်ရုံထုတ်လုပ် pl ...